Igumbi le-House of Blue Mangos#Calanjali (Ensuite) - I-Airbnb
Igumbi le-House of Blue Mangos#Calanjali (Ensuite)
Ikamelo e-ikhaya ibungazwe ngu-Prithika
MAYELANA NALOLU HLU
I-House of Blue Mangos iyisipiliyoni esikhululekile se-Franco-Tamil. Izindonga eziphuzi zeNdlu nemibhede yesitayela sekoloni ihlangana ngaphandle komthungo negceke layo elihle lesi-Tamil kanye ne-'thinnai'. Kunendawo eningi evulekile yokuhlala uphumule, uphumule futhi uvumele isikhathi sinciphe. Lolu hlu olwegumbi le-ensuite 'Calanjali' okuwukuphela kwegumbi eliphezulu.
Ibekwe emzileni othule e-Pondicherry, I-House of Blue Mangos ithola ugqozi encwadini kaDavid Davidar ngegama elifanayo. Ibuyiselwe ngothando kusukela emanxiweni nasemfucumfucwini, Indlu iyinhlanganisela engenamthungo yezakhiwo zakudala zesiTamil kanye nokuzwela kwe-pan-European. I-'thinnai' encane ebukekayo noma ehlezi emnyango ngokuvamile imema noma ubani odlulayo ukuthi aphumule futhi aphumule isikhashana. Igceke elihle, elivulekile lesi-Tamil lamukela imisebe yokuqala yelanga futhi linikeza izindawo ezinhle zokuthi uphumule, ufunde incwadi, noma ungenzi lutho nhlobo. Izindonga eziphuzi ze-Chrome kanye nemibhede yesitayela se-colonial ziyizikhumbuzo eziqhubekayo zamathonya avela kuzo zonke izilwandle. Yonke ifenisha yeNdlu iyisiqephu somlando esikhethwe ngokucophelela. Amakamelo ethu amathathu okulala - i-Kavya, i-Isaioli ne-Calanjali - afakwe kahle ngemibhede yakudala, amakhabethe nezinye izinto zakudala. Yebo, iziphephetha-moya, amagiza kanye nokunethezeka kwehhotela le-boutique zikhona, kodwa azingeni. Noma kunjalo, akukho okuzwakala njengekhaya ngaphandle uma kunekhishi elinobungane; ngakho-ke indawo yethu yokupheka ehlome ngokuphelele ikuvumela ukuthi wenze ikhofi lakho nokudla okunethezekile ngendlela othanda ngayo ekhaya. Kunezindawo eziningi ezivulekile ezizungeze iNdlu, njengoba uzothola ngokushesha; futhi uma uzulazula uze ufike ekugcineni kweNdlu, uzomangala ngalokho ongakuthola - ingadi enemibala emincane kamango eluhlaza okwesibhakabhaka. Kuyithemba lethu ukuthi zikhule ngokushesha ukuze zenze i-House of Blue Mangos ibe yilokho ebesilokhu sikufisa ukuba ibe yikho - indawo ethule lapho singahlala ngaphansi kwayo kuyilapho umhlaba wonke uqhubeka nokuyaluza kwawo okuvamile.
4.75 · 213 okushiwo abanye
Ungamakhilomitha angama-400 ukusuka eWhite Town, 900m ukusuka e-Aurobindo Ashram nase-Rock Beach. Itholakala kuMG Road, leli fulethi liyintokozo kubo bonke abathengi njengoba liseduze neSunday Market, Mission Street kanye noNehru Street "okuyindawo yezitolo" yasePondicherry. Izindawo zokudlela ezihamba phambili namakhefi e-Pondicherry zingaphansi kohambo lwemizuzu eyi-10. Isiteshi sikaloliwe sasePondicherry nesitobhi samabhasi kukude ngamakhilomitha angu-2. I-Nilgris ne-Pothys, izitolo ezinkulu ezimbili ezitholakala kakhulu e-Pondy, ziqhele ngamamitha angu-400. Kunesitolo sokubhaka esidumile maqondana nesakhiwo futhi izindawo zokudlela ezifunwa kakhulu ePondicherry zingaphakathi kwebanga eliyikhilomitha elilodwa.
Ngenkathi siqhelelene neNdlu, sihamba njalo. Uma sise-Pondicherry ngesikhathi uhlala, sizoqiniseka ukuthi sikusiza nganoma iyiphi indlela esingakwazi ngayo. Uma singekho, ungasishayela noma nini, futhi sizokwenza amalungiselelo okwenza ukuhlala kwakho kube ntofontofo futhi kuthokomele ngangokunokwenzeka.
Ngenkathi siqhelelene neNdlu, sihamba njalo. Uma sise-Pondicherry ngesikhathi uhlala, sizoqiniseka ukuthi sikusiza nganoma iyiphi indlela esingakwazi ngayo. Uma singekho, ungasisha…